कर्णाली प्रतिष्ठानमा मंसिरदेखि एमबीबीएस सञ्चालन हुने «
कर्णाली प्रतिष्ठानमा मंसिरदेखि एमबीबीएस सञ्चालन हुने
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आउँदो मंसिर १९ गतेदेखि एमबीबीएस लगायतका कक्षा सञ्चालन हुने भएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणममा पुगेको र विद्यार्थी भर्ना पनि भइसकेकाले मंसिर १९ गतेबाट एमबीबीएस सञ्चालन हुने भएको हो ।
प्रतिष्ठानको निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमअनुसार एमबीबीएस लगायतका अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. निरेश थापाले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानको लक्ष्य तथा उद्देश्यअनुरुप सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम पूर्वतयारी अनुसार अघि बढ्ने निमित्त उपकुलपति डा. थापाको भनाइ छ ।
उनले भने, “पदाधिकारी विवादले प्रतिष्ठानका एमबीबीएसलगायत अन्य कार्यक्रम अन्योल हुने भ्रमित समाचार आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । तर प्रतिष्ठानको बहुप्रतीक्षित एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम एमडी, एमएस, बीएनएस, बीएमएस, बीपीएच र बीफर्मा कार्यक्रम सञ्चालनमा यो विवादले कुनै बाधा अवरोध छैन । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले सबै कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् ।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कात्तिक २५ गतेको सूचनाअनुसार आउँदो मंसिर १९ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठान पूर्णरुपमा तयार रहेको बताएको छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा प्राज्ञिक कार्यक्रममा कुनै पनि रोकावट नभएको निमित्त उपकुलपति थापाले जानकारी दिए ।
साथै प्रतिष्ठानका निमित्त रजिष्ट्रार द्वन्द्वबहादुर शाहीले एमबीबीएस कार्यक्रम कुनै पनि कारणले नरोकिने बताए । उनले भने, “चिकित्सा आयोगले कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सञ्चालनका लागि २० सिट छुटाएको थियो । जसमा १५ जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् भने पाँचजना भर्ना प्रक्रियामामै छन्,” भने अन्य कार्यक्रमका ९० सिटमा ६० जना भर्ना भइसकेका छन् । आगामी मंसिर १९ गतेदेखि कर्णाली प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन र्ने सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
तीन दिनअघि मात्र एकाएक उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम काज रोक्ने निर्णय गरेपछि कर्णालीमा एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम, नियमित काम, सेवा प्रवाह सञ्चालनमा अन्योलता हुने भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको एक दिनपछि अर्थात् बिहीबार प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापालाई निमित्त उपकुलपति र प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुर शाहीलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मा दिएको थियो ।